ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ ဘိုကလေးက နေ ဒီကနေ့ နေ့လည်ပြန်ရောက်ပါတယ်။ သွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့ ဘိုကလေး ရဲ့အခြားအောက်ပိုင်းနေရာတွေ ဖြစ်တဲ့ ကျေးရွာတွေကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သွားရောက်ရခက်ခဲ ပြီး ရေထဲမှာ အသွားအပြန် ၆ နာရီကျော်ကြာအောင် စီးခဲ့ရတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အ၀တ်အထည်တွေ အစား အသောက်နဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကို အဓိကသည်ဆောင်ပြီး လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်လာမည့် အပတ် ထဲမှာ တတိယအကြိမ်အဖြစ်သွားရောက် ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုခရီးစဉ်ပုံများကို အမြန်ဆုံးတင်နိုင်အောင် ကြိုးစား ရင်း အဝေးရောက်မိတ်ဆွေများ အတွက်ဝေငှပေးလိုက်ပါ့မယ်။
This afternoon, we arrived back from Bogale . We went to lower so far from Bogale as villages. This is the hard trip of us and we are ridded the boat over6hrs. We were curried and aid many cloths, foods and any useful things for mankind. Next week, we'll go to Bogale again third time for donate. I'll try to upload of our trip pics for my friends as soon as possible.